We.com.mm - အိပ်ရာထချိန်မှာ ခေါင်းကိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
အိပ်ရာထချိန်မှာ ခေါင်းကိုက်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းများ
မနက်အိပ်ရာထချိန်မှာ လန်းလန်းဆန်းဆန်း နိုးထလာမှ တစ်နေ့တာလုံးအတွက် အားအင်တွေပြည့်ဝပြီး တက်ကြွလန်းဆန်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မနက်နိုးချိန်မှာ ခေါင်းမကြည်ဘဲ၊ အဲဒီထက်ပိုဆိုးတာက ခေါင်း ကိုက်ပြီး နိုးလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအိပ်ရာနိုးချိန်မှာ ခေါင်းကိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေ့တာလုံး မလန်း ဆန်းနိုင်တော့ဘဲ ဘာလုပ်လုပ်စိတ်မပါတာမျိုး ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
အိပ်ရာထချိန်မှာ ဘာလို့ ခေါင်းကိုက်ရတာလဲ? အဲဒီအတွက် အကြောင်းအရင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ မနက်အိပ်ရာ ထချိန်မှာ ခေါင်းမကိုက်ဘဲ လန်းလန်းဆန်းဆန်းနိုးထနိုင်ဖို့အတွက် အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်တွေကို သတိပြုဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။
၁။ ညဘက် အရက်သောက်ခြင်း
ညအိပ်ခါနီးမှာ ဝိုင်တစ်ခွက် ဒါမှမဟုတ် အရက် တစ်ခွက်နှစ်ခွက် သောက်သုံးခြင်းက သင့်ကို အိပ်ပျော်ကောင်း အိပ်ပျော်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခွက်နှစ်ခွက်ထက်ပိုပြီး များများသောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ မနက်နိုးချိန်မှာ သင့်ကို ခေါင်းကိုက်စေမှာ သေချာပါတယ်။ အယ်လ်ကိုဟောဓာတ်ဟာ နည်းနည်းသောက်ရုံနဲ့ သင့်ကိုခန္ဓာကိုယ် ကို ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်စေပြီး ဦးနှောက်မှာ သွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှုကို နှေးကွေးသွားစေတာကြောင့် မနက်နိုး ချိန်မှာ သင့်ကို ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမကြည်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေတာပါ။ အဲဒါကြောင့် အိပ်ရာဝင်ခါနီး ရေတစ်ခွက် ကိုပဲ သောက်သုံးပါ၊ မနက်ခင်းမှာ သင့်ကို လန်းလန်းဆန်းဆန်း နိုးထစေပါလိမ့်မယ်။
၂။ အိပ်ချိန်မမှန်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် အိပ်ချိန်မလုံလောက်ခြင်း
သင့်အနေနဲ့ အိပ်ရေးမဝဝမအိပ်ဘူး ဒါမှမဟုတ် ညစဉ် အိပ်ချိန်ပုံမမှန်ဘူးဆိုရင်လည်း မနက်နိုးတဲ့အခါ ခေါင်း မကြည်တာနဲ့ ခေါင်းကိုက်တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ညစဉ် အိပ်ချိန်မမှန်တဲ့ အကျင့်ရှိရင် သတိထားပြင်ဆင်သင့်ပြီး တစ်နေ့ကို အိပ်ချိန် ၆ နာရီကနေ ၈ နာရီလောက်အထိ လုံလုံလောက်လောက် အိပ်စက်ပေးပါ။
၃။ အိပ်စက်တဲ့အနေအထား မမှန်ကန်ခြင်း
သင့်အနေနဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်ဖို့အတွက် အိပ်တဲ့အနေအထား မှန်ကန်ဖို့လည်း လိုပါသေးတယ်။ အိပ်တဲ့အနေအထား မမှန်ဘူးဆိုရင် ကိုယ်လက်နာကျင်တာ၊ အုံးလွဲတာ၊ ခါးနာတာတို့ ဖြစ်စေသလို မနက်နိုးထ ချိန်မှာလည်း ခေါင်းကိုက်တာမျိုး ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင့်ဦးခေါင်းနဲ့ လည်ပင်းကြွက်သားရဲ့ အနေအထားပုံမမှန်ခြင်းက ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေတာပါ။ အဲဒါကြောင့် ခေါင်းအုံးအနိမ့်အမြင့်ကိုလည်း သတိထားသင့်ပါတယ်။
အိပ်ချိန်မှာ စိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေတွေးတာ ဒါမှမဟုတ် စိတ်ဖိစီးမှုတွေ ရှိတာမျိုးဆိုရင်လည်း သင့်ကို အိပ်မပျော် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ အိပ်စက်ခြင်းဟာ သင့်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်စက်ဖို့လည်း အဟန့်အတားဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒီလို တစ်ညလုံး အိပ်မပျော်ခြင်းနဲ့ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် မအိပ်နိုင်ခြင်းတို့ဟာ သင့် ကို မနက်နိုးထချိန်မှာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းမကြည်ခြင်းတို့ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ကျန်းမာရေးကိုလည်း ထိခိုက်စေပါ တယ်။ အဲဒါကြောင့် စိတ်ကိုရှင်းရှင်းထားပြီး အိပ်စက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
၅။ အိပ်စက်နေချိန်မှာ သွားကြိတ်တတ်ခြင်း
ညဘက်အိပ်နေချိန်မှာ သွားကြိတ်တတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရှိသူတွေ ရှိပါတယ်။ တချို့ကလည်း စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များတဲ့အခါ အိပ်ချိန်မှာ သွားကြိတ်တတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် သွားကြိတ်ခြင်းဟာ အကြိမ်ရေများလာတဲ့အခါ အာရုံကြောအပေါ် သက်ရောက်မှုဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အိပ်ချိန်သွားကြိတ် ခြင်းဟာလည်း မနက်နိုးတဲ့အခါ ခေါင်းကိုက်နိုင်ချေပိုများပါတယ်။
နေ့ဘက်မှာ ကော်ဖီနဲ့ ကဖိန်းဓာတ်ပါတာတွေ အလွန်အကျွံသောက်သုံးမယ်၊ စားသုံးမယ်ဆိုရင် သင့်ကို ညဘက်အိပ်ပျော်စေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီလို ညဘက်မှာ တော်တော်နဲ့အိပ်မပျော်ခြင်းဟာ အိပ်ချိန် မလုံလောက်ခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး မနက်နိုးချိန်မှာလည်း ခေါင်းကိုက်စေပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ကဖိန်းဓာတ်များလွန်းခြင်း ဟာ ဦးနှောက်ကို သွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှု ပိုတိုးစေတာကြောင့်လည်း ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ မနက်ပိုင်းမှာ လန်းလန်းဆန်းဆန်း အိပ်ရာနိုးထပြီး တစ်နေ့တာလုံး တက်ကြွရွှင်လန်းနေချင်ရင် တော့ အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အချက် (၆) ချက်ကို သတိထားဆင်ခြင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။
သွေးလှူဒါန်းခြင်းကနေ သွေးလှူရှင်တို့ရရှိမယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
4 months ago by Paulina
ဖုန်းဝယ်မယ့်သူတွေ Clone ( အတု ) တွေနဲ့ မတိုးမိစေဖို့ စစ်ဆေးရမယ့်အချက်များ
ကြေမွပျက်စီးနေတဲ့ ဆံသားကို ဖြောင့်စင်းတဲ့ ဆံသားဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
ဝိတ်မြန်မြန်ကျဖို့ ညဘက် သောက်အိပ်သင့်တဲ့ အသီးဖျော်ရည် (၅)မျိုး
အနှေးကောင် ခေါ် Sloth တွေရဲ့ ထူးခြားချက် (၁၀) ချက်
သင်မသိရင်တောင်မှ သင်ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိသူဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့ အချက် (၆) ချက်